Abakhiqizi be-glaze ceramic | I-china glaze ceramic Suppliers & Ifektri
Isethi yokudla kwakusihlwa ye-Crackle glaze
Incazelo: Isethi yokudla kwakusihlwa kwe-Crackle glaze
I-Crackle glaze ingenye ye-glaze yombala wokudala.
Futhi kune-glaze ekhethekile ngoba kunemigqa eminingi emincane yokuqhekeka ebusweni bomzimba we-ceramic, kepha umzimba ongaphakathi awukho ukuqhekeka. Imigqa yokuqhekeka inomhlobiso okhethekile kumkhiqizo.
Isethi yesidlo sasebusuku se-glaze
I-glaze yokudala ingenye ye-glaze ekhethekile yombala, ifektri izokwengeza into ethile ye-Metallic ku-glaze yombala, futhi i-glaze yombala izokhombisa umbala ohlukile omangazayo nge-Oxidation noma nge-Reduction ngokudubula ku-Tunnel fire. Njengoba lokhu kungukusabela kwamakhemikhali nokusabela kwe-oxidizing, akekho owaziyo ukuthi i-glaze izokhombisa ukuthi imuphi umbala nothando ngesikhathi sokudubula. Ngakho-ke i-glaze esiyibiza ngokuthi yi-ONE FUTHI KUPHELA umbala we-glaze.
Manje sesiphinde sakha enye indawo yothando, esibize ngayo i-Speckle color glaze, ingakhombisa amachashazi amancane ebusweni lapho uthinta umkhiqizo ngesandla.
i-speckle color glaze + hand paint dinner dinner set-coupe shape
I-speckle color glaze ingenye yezinhlobo ze-Creative glaze; ubuchwepheshe obukhethekile, iyiphi ifektri ezokwengeza okuthile kwe-Metallic ku-glaze yombala, bese upenda ngesandla irimu. Umbala we-glaze uzokhombisa umbala ohlukile omangazayo ngokudubula nge-Oxidation noma nge-Reduction ku-Tunnel kiln. Njengoba lokhu kungukusabela kwamakhemikhali nokusabela kwe-oxidizing, akekho owaziyo ukuthi i-glaze izokhombisa ukuthi imuphi umbala nothando ngesikhathi sokudubula. Ngakho-ke i-glaze esiyibiza ngokuthi yi-ONE FUTHI KUPHELA umbala we-glaze.
umbala we-glaze dinner set-Flat shape
Okubalulekile: I-Stoneware ene-glaze yombala
Umbala we-glazing usebenzisa ukuhlushwa okuhlukile ukufanisa ingxenye ehlukile njengomhlobiso, ifektri izokwenza iphethini ye-emboss kusikhunta, iphethini izokopishela kumkhiqizo. Kungathinta umugqa we-emboss ngesandla.
umbala we-glaze dinner set-Hexagon shape
Leli qoqo linokuma okukhethekile okungeyona isimo esijwayelekile esiyindilinga kepha kunesimo se-Hexagon, ukuma kwe-Octagonal, ukuma kwesikwele, kanye nendishi yomumo wokwehlisa amanzi. Ifanele kakhulu ukusetshenziswa kwamaholide, futhi ingasebenza njengesethi yesipho. Ungakhetha ukuma okuhlukile futhi uhambisane nombala ohlukile njengesethi eyodwa.
I-emboss color glaze ingenye ye-glaze ekhethekile yombala, imboni izokwenza iphethini ye-emboss kusikhunta, iphethini izokopishela kumkhiqizo. Kungathinta umugqa we-emboss ngesandla.
I-emboss color glaze dinner set-Coupe shape